Efitranon'ny zazalahy - fanaka - fitaomam-panahy
Sokajy: Efitranon'ny zazalahy
Ny efitranon'ny ankizy ho an'ny zazalahy dia toerana tena lehibe. Ny efitranony no fialofana ho azy ireo, izay handaniany fotoana betsaka. Ao amin'ny efitranony dia milalao izy ireo, manonofinofy, mianatra na miala sasatra mihitsy aza. Noho izany dia tena ilaina ny misafidy ny efitrano mety sy ny fanaka mety. Azonao atao ny manatsara ny efitran'ireo zazalahy miaraka amina fandriana kanto. Ny fandriana dia tokony hahazo aina sy ampy ampy. Mila ny latabany avy ny zazalahy rehetra. Manoro hevitra izahay ny hisafidy seza misy kalitao ho an'ny latabatra izay mifanaraka amin'ny mason-tsivana rehetra amin'ny fipetrahana mety. Ilaina ny fiarovana azo antoka sy avo lenta. Ao amin'ny tranokalanay afaka misafidy fanaka isan-karazany ianao.
Efitra ho an'ny hafaliana amin'ny lalao
28 Oktobra 2018 16 Febroary 2021 Admin
Ny zazalahy dia mihalehibe amin'ny habetsahan'ny angovo. Mety tsy ho mora ny manangana efitranon'ny zazalahy mba hahafahan'izy ireo mahita fotoana malalaka hilalao sy toerana hialana sasatra. Izahay dia manome aingam-panahy ho anao. Toerana filalaovana ao amin'ny efitranon'ny ankizy ho an'ny zazalahy dia ilaina ny mamela toerana malalaka hilalaovana. Mitadiava vahaolana manohana ny fahaiza-mamorona voajanahary ny ankizy. Raha te hanana toerana filalaovana misimisy kokoa ianao dia afaka mividy […]
Manamboatra efitrano ho an'ny zazalahy izahay
1 Aogositra 2018 16 Febroary 2021 Admin
Ny efitranon'ireo ankizy ho an'ny zazalahy dia samy manana ny toetrany manokana. Faly ve ny zanakao isaky ny mampientam-po? Sa mpikaroka kely maniry eo amin'ny akanin-jaza? Raha mieritreritra kely momba ny tombontsoan'ny zanakao lahy ianao dia aza hadino ny manao ny efitranony hilamina. Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo antsipiriany miandry anao. Loko […]